Eva Krbdk, farshaxanka tattoo | Tattoo
Dhawr saacadood ka hor, aniga oo daalacanaya Tumblr oo eegaya dhammaan noocyada naqshadaha naqshadaha, waxaan la kulmay naqshado qaarkood oo si deg deg ah u soo jiitay dareenkeyga sababo la xiriira macaan, qurux iyo nolol ku nool ay faafiyeen. Waxaan si dhakhso leh u bilaabay baaritaan ku saabsan farshaxanka tattoo yaa ka dambeeyay abuuritaanadan oo la siiyay, iyada, Eva Krbdk. Tattooiste caan ah oo reer Turki ah.
In kastoo asal ahaan Eva Krbdk waxaa lagu tababaray Istanbul (Turkey), wuxuu hadda ku sawirayaa istuudiyaha magaalada New York (Mareykanka). Qaabka astaamihiisa iyo naqshadaha sida dhaqsaha ah loo aqoonsan karo ayaa ka dhigay dad badan inay go’aansadaan inay maqaarkooda ku qabsadaan qaar ka mid ah muuqaalka muuqaalka ee Eva taqaanno sida loo sameeyo si dhammaystiran, iyagoo isku daraya qaabab iyo farsamooyin kala duwan oo moodada ku jira.
Xaqiiqdi taasi waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee caan ka dhigaya Eva Krbdk (caddeynta iyaga ayaa ah ku dhowaad nus milyan taageerayaal barta Instagram). Kaliya fiiri dhaqso ah tattoos ay Eva Krbdk sameysay si loo ogaado inuu ku guuleystay inuu helo isku dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya qaababka sida casriga ah «Watercolor» iyo waaqica.
Intaa waxaa dheer, dhibaatada ay leedahay adeegsiga wax kabadan hal farsamo, waxaan leenahay qodobka goobta. Farshaxanka Tattoo-ga Turkiga wuxuu awood u leeyahay abuurista tattoos leh heer sare oo faahfaahsan inkasta oo ay yar yihiin. In kasta oo ay adkaan doonto in ballan lala yeesho farshaxankan sawirka leh, haddana waxaan mar walba sugi karnaa inay ku aragto qaar ka mid ah carwooyinka ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigo tattoo-yada Yurub si looga faa’iideysto munaasabadda.
Eva Krbdk Sawirada Tattoo
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » La kulanka tattooists: Eva Krbdk
Fikrad xun: Siyaasiyiinta Isbaanishka waxay ku doodaan in la xakameeyo astaamaha